Madaxweyne Qoorqoor oo arrin cajiib ah sameeyey. – Soomaali 24 Media Network
Madaxweyne Qoorqoor oo arrin cajiib ah sameeyey.
Posted on April 5, 2021 Leave a Comment on Madaxweyne Qoorqoor oo arrin cajiib ah sameeyey.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor Qoor) ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusomareeb ee caasimada Galmudug uu ka maqnaa in ka badan 40-cisho, muxuuse daaranyahay safarkiisu
Dastuurka u degsan maamulka Galmudug ayaa dhigaya in Madaxweynaha deegaanada Galmudug uusan ka maqnaan karin mudo 45-cisho ah, waxaana la sheegay in Qoor Qoor ka dhamaatay 45-cisho uuna doonayo in uu tago Dhuusomareeb kan asoo laabto.
Qoor Qoor ayaana safarka deg dega ah uu ku tagayo magaalada Dhuusomareeb salka ku haya sidii uu u heli lahaa waqti kale oo dheeraad ah oo kaga soo maqnaado deegaanada Galmudug si uu uga qeyb galo shirarka xalka loogu raadinayo doorashada.
Sida aan wararka ku helnay Madaxweyne Qoor Qoor ayaa saacado kooban kaliya ku sugnaan doono Dhuusomareeb waxa uuna si deg deg ah ugu soo laaban doonaa magaalada Muqdisho uu ka socdo shir u dhaxeeya Madaxda DF iyo kuwa maamulada.
Teendhada Afisiyooni waxaa ka furmay shir u dhaxeeya madaxda Dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, shirkan oo socday mudo labo maalin ah ayaa la filayaa in mar kale madaxda beri isugu soo laabtaan.
← Qof walba oo fashiliya dadaalka socda, wuxuu magan u noqon doonaa taariikh madoow,
Wasiir ku xegeenka warfaafinta Somalia oo baaq u diray dhalinyarada Soomaaliyeed. →